warkii.com » Sara alikhan iyo Rekul Preet warbaahinta ayee kanasa la.yihiin. iyo xaalada Rhea!!
Sawirro: Maxaa ka cusub xiisadda QOOR QOOR iyo saraakiisha beesha CEYR?
Mareykanka oo shaaciyey is-afgarad la xiriira doorashada oo ay la gaareen Rooble
Sara alikhan iyo Rekul Preet warbaahinta ayee kanasa la.yihiin. iyo xaalada Rhea!!
Rhea Chakraborty ayaa dhowr maalin su’aalo lagu weydiiyay xafiiska daroogada mukhaadaraadka iyadoo lagu eedeeyay inee xiriir la leedahay kuwa ka ganacsada daroogada, s
aktarada ayaa magacawday 25 qof oo caan ka ah Bollywood. Sida lagu sheegay warbixin Times Now, Rhea waxay magacowday Sara Ali Khan, Rakul Preet Singh iyo naqshadeeye Simone Khambatta inee qeyb kayihiin kuwa cuna maandooriyaha. Si kastaba ha noqotee beeninta sheegashooyinkaas, Free Press Journal ayaa soo xigatay agaasime kuxigeenka NCB KPS Malhotra, oo sheegay inaysan wali diyaarin liis Bollywood ah oo looheesto kiis daroogo.
Wuxuu sidoo kale cadeeyay in liiskan horey loo diyaariyay uu ahaa kuwa iibiya iyo kuwa wax tahriibiya, kuwaas oo ku wareersan Bollywoodka.waxaa jira agaasimayaal iyo soosaarayaal ka socda Bollywood, kuwaas oo lagu eedeeyay inay xiriir la leeyihiin kuwa ka ganacsada daroogada. Rhea waxay magacowday ilaa 25 magac oo caan ah oo caan ah oo ka tirsan Bollywood-ka,
Rhea Chakraborty waxaa xiray NCB usbuucii la soo dhaafay, iyagoo baaraya xagjirnimada daroogada ee kiiska dhimashada Sushant Singh Rajput. Maxkamad gaar ah oo ku taal Mumbai ayaa jimcihii diiday dalabkeedii dammaanada ee Rhea iyo walaalkeed Showik.
Walaalaha ayaa la filayaa inay maanta u dhawaadaan maxkamada sare si damiin loogu sii daayo. Waqtigaan la joogo, Rhea waxay ku jirtaa xabsi garsoor illaa Sebtember 22 waxaana lagu xereeyay Jeelka Byculla. dacwada daroogada ayaa la soo saaray ka dib markii Agaasinka Fulinta, oo baaraya dacwada lacagta la dhaqay, ee sheegayn inuu la wadaagay diiwaanada wada sheekaysiga Rhea ee NCB ka dib markii ay heleen xog muhiim ah oo daroogada Rhea kusaabsan.